Sida loo sameeyo liisaska heerar badan leh ee Ereyga qaab fudud | Madasha Mobile -ka
Sida loo sameeyo liisaska heerar badan leh ee Word si fudud
Qolka Ignatius | | Microsoft Word, Tababarada
Markaad ku dalbanayso macluumaadka dukumintiga si ay u noqoto mid aad loo arki karo, mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican ee aan haysanno waa abuurista liisas. Si kastaba ha ahaatee, marka macluumaadka aan rabno inaan muujino uu ka adag yahay, ikhtiyaarka ugu fiican ayaa ah in lagu kala sooco waxyaabaha ku jira liisaska heerarka badan leh.
Hadaad rabto inaad ogaato sida loo sameeyo liisaska heerar badan leh ee EreygaAdigoon dhiman adiga oo isku dayaya inaad ka faa'ideysato dukumiintiyada Ereygaaga, waxaan kugu martiqaadayaa inaad sii waddo akhrinta maqaalkan oo aan ku tusinno talooyinka iyo tabaha ugu fiican si aad uga faa'ideysato liisaska Microsoft Word.
Waad ku mahadsan tahay rasaasta leh heerar dhowr ah, waxaan habeyn karnaa sharraxaadda liisaska aan ku abuurno dukumiintiyada, is -habeyn taas oo, habka, aan awoodno badbaadi sida style in mar dambe loo adeegsado qaybaha kale ee dukumintiga ama dukumiintiyada kale si loo ilaaliyo isla bilicsanaanta.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan ka ogaanno sida liisaska heerarka kala -duwan ay u shaqeeyaan waa inaysan waxba ahayn liisaska ku jira liisaska dhexdooda. Sidan, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan baranno waa inaan abuurno liisas. Markaan samaysanno liis, waxaan ku abuuri karnaa liisaska liisaska dhexdooda, taas oo ah, liisaska heerar badan leh.
1 Sida loo abuuro liis Word ah
1.1 Sida loo abuuro rasaasta cusub
1.2 Sida loo abuuro liisaska Word
2 Sida loo abuuro liis heerar kala duwan leh ee Ereyga
3 Sida loo tirtiro liisaska
4 Abuur qaab liis cusub iyo liisas heerar badan leh
Sida loo abuuro liis Word ah
Waqtiga ku samee liis Word, waxaan haysanaa laba ikhtiyaar:
Hore u qor qoraalka aan rabno inaan u beddelno liisas annagoo ku abuureyna walxo kasta cutub gaar ah.
Ku qor qoraalka liiska, liis si otomaatig ah loo qaabeeyey ilaa aan ka riixno furaha Enter laba jeer ama aan kala furfuro ikhtiyaarka iyada oo loo marayo xargaha.
Si loo abuuro liisas, Word wuxuu na siiyaa waxyaabo kala duwan si aan u habaynno muuqaalkiisa. Si tan waxaa lagu magacaabaa calaamad.
Dhinac dhaqameedka ay kartoonadu had iyo jeer muujiyaan ayaa ah dhibco ama labajibaarane. Si kastaba ha noqotee, laga bilaabo Ereyga, waxaan u adeegsan karnaa cunsur kasta oo kale, sida rhombus, emoji, fallaar, calaamadda lagu daray, afargeeshka hooska leh, astaanta la arkay ...
Sida loo abuuro rasaasta cusub
Laakiin sidoo kale, haddii mid ka mid ah astaamaha uu codsi ahaan waddanku na siinayo aanu ahayn mid aannu jecel nahay, waan awoodnaa adeegso walxo cusub adoo adeegsanaya ikhtiyaarka Rasaasta.
Marka xigta, waa inaan doorannaa il ay ku jiraan waxyaabo la soo bandhigay oo aan u adeegsan karno inaan ku habaynno bilicsanaanta liisaska, ahaanshaha Garabyada, Garabka 2 iyo Garabka 3 fursadaha ugu fiican ee arrintan la xiriira.
Haddii aan u adeegsanno xaraf gaar ah si aan u abuurno xabbad oo aan laga helin nidaamka hawlgalka qofka heli doona dukumintiga, halkii calaamad yaab leh ayaa la soo bandhigi doonaa, haddaba haddii ikhtiyaarkan uu jiro, waxaa ugu wanaagsan in la iloobo ikhtiyaarkan oo la isticmaalo mid kasta oo ka mid ah rasaasta hooyo ee uu Word na siiyo.
Sida loo abuuro liisaska Word
Qeybtii hore, waxaan kaga hadlay labada qaab ee aan haysanno marka la samaynayo liisaska Word. Tusaale ahaan waxaan ku tusin doonnaa hoosta iyo inaan wax walba muuqaal ahaan u sii caddaynno, waan u soconnaa qaabee liis aan hore u sameeyay.
Mar haddii aan abuurnay liistada, si aan ugu darno rasaasta noo oggolaaneysa inaan kala soocno oo aqoonsanno dhammaan walxaha ka mid ah, waxaan doorannaa qoraalka oo waxaan gujinnaa mid ka mid ah labada badhan ee matala liiska.
Badhanka kowaad wuxuu na tusayaa liis iyadoo la adeegsanayo rasaas.
Badhanka labaad wuxuu na tusayaa liis isticmaalaya tirooyin iyo xarfo.
Xaaladeena, waxaan adeegsan doonnaa badhanka koowaad oo waxaan dooran doonnaa xabad ka duwan tii hore Ereygu asal ahaan wuu na siiyaa.
Adigoo gujinaya falaarta hoose ee ku taal dhinaca midig ee badhanka Rasaasta, dhammaan walxaha aan isticmaali karno waa la muujiyaa. Xaaladeena, waxaan dooranay astaanta u taagan wejiga murugada leh.
Sida loo abuuro liis heerar kala duwan leh ee Ereyga
Mar haddii aan ku abuurnay liis ereyga, waxaan hadda abuuri karnaa liis heerar badan leh, oo ah, liis ku jira liis. Si loo muujiyo sida loo sameeyo, waxaan adeegsan doonnaa qoraalkii hore.
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno ayaa ah dooro dhammaan walxaha ku jira liiska oo guji mid kasta oo ka mid ah labada badhamood ee matalaya liisaska rasaasta ama tirooyinka, maadaama ikhtiyaarkan laga helay labada menu.
Marka xigta, waxaan ku doorannaa ikhtiyaarka dhexdiisa Liisaska heerarka badan, qaabka ugu habboon waxa aan raadinaynno: tirooyin, tirooyin iyo xarfo ama rasaas oo keliya.
Si otomaatig ah, qaabka liiska waa la beddeli doonaa tusaya kii aan dooranay. Hadda waa waqtigii la abuuri lahaa liisaska liisaska ku jira.
Si aan sidaas u yeelno, waa inaan ku qorno hoosta liiska meesha aan rabno inaan ka abuurno liis -hoosaad, riix tabka waxaan arki doonaa sida liiska loogu dhex abuuray liiska dhexdiisa. Haddii aanaan doonayn inaan sii wadno adeegsiga liis -hoosaadyada, waxaan riixnaa furaha Gelinta laba jeer ama waxaan u dhaqaaqnaa qeybta xigta ee liiska aan rabno inaan ka abuurno liis -hoosaad.
Sida loo tirtiro liisaska
Si loo baabi'iyo liisaska ama liisaska heerar badan haddii aynaan mar dambe u baahnayn inaan sii wadno gelinta walxaha ku jira liistada, waa inaan kaliya riixnaa furaha Gelinta ilaa cursorku ka muuqdo bidixda shaashadda.
Haddii aan dooneyno inaan tirtiro liis ama liis heer -sare ah oo aan abuurnay, waxa ugu horreeya ee la sameynayaa waa xulashada qoraalka meesha liistadu ku taal ka dibna guji badhanka noo oggolaanaya inaan abuurno liisaska iyo liisaska heerarka badan leh. Haddii aan mar labaad riixno, qoraalka ayaa dib loo qaabayn doonaa siduu markii hore ahaa.
Abuur qaab liis cusub iyo liisas heerar badan leh
Haddii aysan jirin mid ka mid ah qaababka ay Microsoft Word asal ahaan na siiso si aan u abuurno liisas iyo liisas heer -sare ah, waxaan abuuri karnaa qaabkeenna, qaab aan u keydsan karno qaab ahaan una adeegsan karno mar kasta oo aan u baahanno. Si loogu abuuro qaab liis cusub erayga, waa inaan fulinaa tallaabooyinka aan hoos ku tusayo:
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa xulashada liiska aad rabto inaad wax ka beddesho.
In Tabka guriga, Kooxda Faqrada, guji falaarta ku xigta Liiska badan kadibna guji Qeex qaabka liisaska cusub.
Sheeg magaca qaabka liisaska cusub, magac noo oggolaanaya inaan si dhakhso ah u aqoonsanno qaabka aan rabno inaan codsanno.
Marka xigta, waxaan galnaa lambarka aad rabto inaad ka bilowdo liistada (haddii aanaan gelin qiime kasta, tani waxay noqon doontaa 1).
Marka xigta, waxaan doorannaa heerka liiska si aan u dabaqno qaabka, waxaan cayimnaa cabbirka iyo midabka font -ka qaabka liiska.
Marka xigta waxaan u doorannaa calaamad liistada waxaanna dejineynaa haddii aan rabno inaan u wareejinno galinta bidix ama midig.
Ugu dambayntii waxaan adeegsanaa isbeddeladaan Dukumentiyada cusub ku salaysan templateka oo guji OK.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Qalabka otomaatiga » Microsoft Word » Sida loo sameeyo liisaska heerar badan leh ee Word si fudud
Codsiyada ugu fiican ee youtubers -ka oo aad ku guuleysan doonto
Cinwaan -hoosaadyada filimada: meesha laga soo dejinayo iyo sida loo daawado